Dibadbaxyo rabshado wata oo kasocda Jigjiga – Radio Daljir
Dibadbaxyo rabshado wata oo kasocda Jigjiga
Agoosto 4, 2018 10:36 b 0
Ciidamada dowladda faderaalka ee Itoobiya ayaa la wareegay xarumaha baarlamaanka, wasaaradaha iyo talfeshinkii dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, iyadoona ay hareeyeen dibadbaxyo rabshado wata.
Sawaxan xoogan ayaa laga maqlayaa magaalada, rasaas iyo taayaro la arkayo oo ay gubayaan taageerayaasha maadxwaynaha dowlad deegaanka, iyadoo muuqaal la baahiyay uu muujinayo dab la qabadsiiyay kaniisad magaalada ku taala.
Wararka ayaa sheegaya inay u muuqato afgambi, iyadoo warar la helayo sheegayaan inuu baarlamaanka kasocday kulan ay ugu dhawaaqayaan gooni goosad.
Ciidamada Liyuu Boolis ayaa iyaguna ku wareegaya hareeraha magaalada.
Ciidamada Faderaalka ee Itoobiya oo la wareegay magaalada Jigjiga